Mashopu Ekutenga Zvekare-Zvine Mari Yekufambisa Midziyo - Mawiricheya
Kuwana unhu kufamba zvishandiso zvinogona kunetsa kunyanya kana iwe uri pane yakaoma bhajeti. Neichi chikonzero makambani mazhinji anotendera vanhu kuti vatengese mune yavo yekare mamodheru kune matsva, izvo zvinoita kuti zvashandiswa mamodheru zviwanikwe kune vamwe vashandisi pamutengo wakadzikira.
Kana uri kutsvaga wiricheya or sikuta yemagetsi yakashandiswa zvinyoro nyoro inogona kunge yakakodzera kufunga nezvayo. Iwo matipi pazasi achakubatsira iwe kuwana zvakanyanya kune yako mari.
Kana uri kutsvaga wiricheya or kufamba scooter, tenga uchitenderedza mutengo wakanaka. Kunyangwe hazvo michina yavo mitsva yakafanana, yavo yekushandisa hesheni inogona kusiyana zvakanyanya kubva kunzvimbo nenzvimbo. Paunotarisa-tarisa pane akasiyana madhiri, mikana yako iri nani zvikuru yekutsvaga wiricheya kana sikuta iri mukati mebhajeti yako.
Iwe unofanirwa kupa mavhiri ako matsva kutenderera usati waita yako yekupedzisira sarudzo. Ive neshuwa kuti zvese zvinodzora zvinoshanda nemazvo uye kuti unonzwa kugadzikana mu wiricheya kana sikuta, nekuti unogona kunge uri kushandisa nguva yakareba mavari.
Uyezve edza nharaunda inotendeuka kuti uone kuti zviri nyore sei kufamba-famba munzvimbo dzakaomarara. Iwe unogara uchiita sarudzo iri nani kana iwe ukaedza kutyaira yako kufamba sikuta kana wiricheya.
Kana iwe uine sarudzo, tenga zvishandiso zvakashandiswa izvo zvichiri kusanganisira garandi. Kana paine chero kukundikana kwemuchina, iwe unenge uchiri kufukidzwa. Ko kana sikuta kana wiricheya hauna garandi? Makambani mazhinji anokutengesa iwe warandi nemidziyo yako.
Taura neInishuwarenzi Yako Kambani
Taura nekambani yeinishuwarenzi kuti uone kana vachizovhara imwe wiricheya kana scooter mhando kana brand. Kana izvi zviri izvo, zvinogona kunge zvichakanganisa danho rako rekupedzisira. Paunenge iwe uchinge waziva kuti ndeapi marudzi emidziyo iyo yako inishuwarenzi kambani ichavhara, iwe unogona kutarisisa zvakanyanya pane yakashandiswa hesheni yezvakasiyana zvitoro.
Scooter yakamboshandiswa kana pre-muridzi ndiyo nzira yekuenda kana iwe uchida kuchengetedza mari uye iwe unozoziva kuti wakafukidzwa kana ukazomboda kubatsirwa mumugwagwa. Iwe ungatofanira kuramba uchitarisa kusvikira iwe wawana yako yakakwana kufamba mudziyo, saka iva nemoyo murefu.
Rrangarira chishandiso chakashandiswa chinogara chichiuya kuzvitoro zvakasiyana, saka ramba uchitarisa uye iwe unowana chako chakakwana wiricheya kana sikuta.